तपाईंले हेपेटाइटिस बी खोप लिनु पर्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य समाचार, कल्याण समाचार चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के तपाई हेपेटाइटिस बी खोप लिनुहुन्छ?
के तपाई हेपेटाइटिस बी खोप लिनुहुन्छ?
हेपेटाइटिस बी एक संक्रमण हो जसले कलेजोलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ, स्थायी दाग ​​(सिरोसिस) सहित, कलेजो क्यान्सर , कलेजो विफलता, जीर्ण कलेजो रोग, र मृत्यु। यो हेपाटाइटिस बी भाइरस (HBV) को कारणले हुन्छ, जुन रगत, वीर्य, ​​र अन्य शरीर तरल पदार्थमा फेला पार्न सकिन्छ।
यस अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथाम (CDC) का लागि केन्द्रहरू यस देशमा करिब २२,००० व्यक्ति तीव्र एचबीभी संक्रमण (एक छोटो अवधिको रोग) बाट बाँचिरहेका छन्, जबकि १ लाख भन्दा बढीलाई लामो समयदेखि हेपाटाइटिस बी इन्फेक्सन छ - जसले थकान, ज्वरो, र पेट दुखाइ जस्ता अस्पष्ट लक्षणहरू पैदा गर्न सक्छ - खोपका साथ रोकिएको छ, तर सबैजना खोप हुने छैनन्। हेपाटाइटिस बी खोप सामान्यतया शिशु / बच्चाहरू र केहि उच्च जोखिम समूहहरूमा वयस्कहरूको लागि सिफारिस गरिन्छ। तर हेपेटाइटिस बी एक संक्रमण हो कि हो एक तिहाई अवस्थाहरूमा एसिम्प्टोमेटिक र तरल पदार्थहरू मार्फत फैलियो जुन पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तपाईलाई लाग्न सक्छ कि सबैले खोप लगाउनु पर्छ कि पर्दैन। यहाँ, तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ।
हेपाटाइटिस बी को खोप को आवश्यक छ?
यस अनुसार हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन , ,000०,००० अमेरिकीहरू प्रत्येक वर्ष हेपेटाइटिस बी विकास गर्छन्। विश्वव्यापी रूपमा, प्रत्येक मिनेटमा दुई व्यक्तिहरू मर्छन्।
पछि 1991 , यो सिफारिश गरिएको छ कि सबै स्वस्थ नवजात शिशुलाई जन्म पछि चाँडै नै हेपाटाइटिस बी खोप दिइन्छ। अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स (एएपी) ले भन्छन् कि स्वस्थ नवजात शिशुहरूले आफ्नो खोपको पहिलो डोज जन्मको २ hours घण्टा भित्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ, दोस्रो खुराक १ देखि २ महिनाको उमेरमा, र तेस्रो र अन्तिम खुराक and देखि १ 18 महिनाको बीचमा प्राप्त गर्नुपर्दछ। यदि जन्म मोथेरा आमाले गर्भावस्थामा हेपेटाइटिस बीका लागि सकारात्मक परीक्षण गर्दछ (र गर्भवती महिलालाई नियमित रूपमा परीक्षण गरिन्छ), ती समय सारिणीहरू सारिन सकिन्छ किनभने हेपेटाइटिस बी जन्म प्रक्रियामा प्रसारित गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरूलाई किन हेप बी खोपको आवश्यकता पर्छ, विशेष गरी यदि तिनीहरू वयस्कहरूको बीचमा बसिरहेका छन् जो एक उच्च जोखिमको समूहमा छैनन्। किनकि हेपेटाइटिस बी भाइरस संक्रमण भएका धेरै व्यक्ति asymptomatic हो, र यो संक्रमण संक्रमित व्यक्तिको टुथब्रश वा दाढी काट्ने इजाजस्तो निर्दोष चीजबाट पनि सार्न सकिन्छ। फिलाडेल्फियाको बच्चाहरूको अस्पताल अनुसार (CHOP), हेपेटाइटिस बी एचआईभी भन्दा १०० गुणा बढी संक्रामक हो । हेप बी खोपको तीनै खुराक प्राप्त गर्ने of percent प्रतिशत बच्चाहरूलाई संक्रमणले निम्त्याउने जटिलताबाट सुरक्षित राख्नुपर्दछ, “आप” भन्छ।
युवा खोपको अर्को कारण? एएपीले यो नोट पनि गर्‍यो कि यस देशमा हेपाटाइटिस बीबाट मर्ने the,००० वयस्क मध्ये आधा भन्दा बढीले बच्चाको रूपमा संक्रमण संकलन गरे। यदि तपाईं एक वयस्क हुनुहुन्छ जो निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईंलाई कहिले पनि खोप लगाइएको छ वा छैन, तपाईं रगत परीक्षण लिन सक्नुहुन्छ जुन प्रतिरक्षाको लागि जाँच गर्दछ — तर सबैका लागि यो ठीक हुँदैन; तपाईले आफ्नो प्रदायकसँग जाँच गर्नुपर्दछ कि जाँच उपयुक्त छ कि छैन भनेर।
यदि तपाईं पहिले नै प्रतिरक्षा हुनुभयो भने, तपाईं अतिरिक्त शटहरू पाउन र अनावश्यक क्लिनिक भ्रमणहरू गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी COVID को युगमा, नोटहरू आमोन असगरपुर , एमडी, न्यु योर्क शहर माउन्ट सिनाई मा माका मा Icahn स्कूल अफ मेडिसिन मा जिगर रोग को प्रभाग मा एक सहायक प्रोफेसर। यद्यपि एकल-एन्टीजेन हेपेटाइटिस बी भ्याक्सिनको अतिरिक्त डोज प्रशासन गर्नु हानिकारक छैन।
खोप लगाईनु पर्ने अन्यले भने CDC , समावेश गर्नुहोस्:
पुरुषहरू जो अन्य पुरुषहरूसँग यौन सम्पर्क राख्छन् वा यौन सम्पर्क राख्छन्।
व्यक्ति जो एक परस्पर एकल यौन सम्बन्ध मा छैनन्।
व्यक्ति यौन संचारित रोगहरू (एसटीडी) को उपचार वा मूल्या evalu्कन भइरहेको छ।
इंजेक्शन औषधि प्रयोगकर्ताहरू वा अन्यहरू जसले साझेदारी गर्छन् वा सुईहरू प्रयोग गर्छन्।
स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरू, सार्वजनिक सुरक्षाकर्मीहरू, कैदमा परेका व्यक्तिहरू, र जो काम गर्छन् वा बौद्धिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूको लागि सुविधामा बस्छन्।
हेपाटाइटिस बी को लागी सकारात्मक परिक्षण गर्ने मानिसहरुको घरका सम्पर्क हुन्।
ती व्यक्ति विश्वका क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्छन् (उदाहरणका लागि, पूर्वी र मध्य युरोपको केही भागहरू, अफ्रिका, र दक्षिण र मध्य अमेरिका) उच्च हेपेटाइटिस बी दरहरूको साथ।
निश्चित पुरानो रोगहरू भएका व्यक्तिहरू, जस्तै कलेजो रोग (सहित) हेपेटाइटिस सी ), मधुमेह, मिर्गौला रोग, र एचआईभी संक्रमण।
हेमोडायलिसिस बिरामीहरू (हेमोडायलिसिस एक प्रक्रिया हो जसमा रगतबाट फोहोर उत्पादनहरू फिल्टर हुन्छन्; यो त्यस्तो व्यक्ति द्वारा प्रयोग गरिन्छ जसको मिर्गौला ठीकसँग काम गर्दैन)।
गर्भवती महिलाहरू जोसँग धेरै सेक्स पार्टनरहरू छन्, नसा औषधि प्रयोगकर्ताहरू हुन्, STT का लागि मूल्यांकन गरिन्छ वा हेपाटाइटिस B का सकारात्मक साझेदार छ। CDC का अनुसार, गर्भवती महिलाहरूले सुरक्षित रूपमा खोप लिन सक्छन् तिनीहरूका अजन्मे शिशुलाई कुनै क्षति बिना।
के हुन्छ यदि तपाईं यी सबै कोटीहरूको बाहिर जानुहुन्छ — के तपाईंले अझै खोप लिनु पर्छ? संक्रमित हुने वास्तविक जोखिम जनस across्ख्यामा धेरै फरक हुन्छ, यो खोप यति सुरक्षित र सजीलो छ कि सबै वयस्कहरूले यसलाई लिनुपर्दछ, उनीहरूको व्यक्तिगत जोखिमको बाबजुद, सेवानिवृत्त परिवार अभ्यास चिकित्सक, एमडी क्रिष्टिन ट्राक्सलर भन्छिन्। मेरो बच्चा भएको छ: अब के?
भ्याक्सिन सुरक्षा र प्रभावकारिता
१ 1990 1990 ० को सुरुदेखि शिशुहरूको व्यापक खोपको लागि धन्यवाद, हेपेटाइटिस बीको समग्र प्रसार यस देशमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। यद्यपि एचबीभीको संक्रमण केही वर्षहरूमा विशेष गरी 30० देखि 49 years वर्ष उमेरका बीचमा बृद्धि भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग (HHS) । एजेन्सीले अधूरो खोप कभरेज (हेपाटाइटिस बी खोप सामान्यतया शटको एक खोप श्रृंखलामा दिइन्छ) र यस उमेर समूह बीच लागूऔषधको प्रयोगमा बृद्धि, विशेष गरी ओपिओइड ड्रग्स। २०१ In मा, तीव्र हेपेटाइटिस बी संक्रमण दर बढ्यो २०..7% , करीव १० बर्षमा पहिलो वृद्धि एचएचएस भन्छ।
धेरै हेप बी खोपहरू खोप तालिकामा दिइन्छ जसमा तीन खुराक समावेश हुन्छ, केही महिनाको दूरीमा। २०१ 2017 मा, खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले दुई-खुराक खोप (भनिन्छ) लाई अनुमोदन गर्‍यो हेप्लिसाभ-बी ) वयस्कहरूमा प्रयोगको लागि days० दिनको छुट्याइन्छ। तपाईं उच्च प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया र दुई खुराक कार्यक्रम, नोटसँग राम्रो अनुपालन प्राप्त गर्नुहुन्छ रोबर्ट जी। Gish , एमडी, हेपेटाइटिस बी फाउन्डेसनको मेडिकल निर्देशक।
हेप बी खोप (हेप्लिसभ-बीका साथै अन्य ब्राण्ड नामहरू पनि समावेश छन् Engerix-B र रिकोम्बिभास एचबी ) दशकौं को लागी भएको छ। जबकि कसैलाई पक्का थाहा छैन कहिलेसम्म खोपले प्रतिरक्षा प्रदान गर्दछ, कम्तिमा एउटा अध्ययन २०१ 2016 बाट देखाउँछ कि यो कम्तिमा 30० बर्ष लाग्न सक्छ। बूस्टर शटहरू सामान्यतया स्वस्थ मानिसहरूका लागि सिफारिश गरिदैनन् जो खोप लगाईएका छन्।
हेप बी खोप एक जीवित खोप होईन, त्यसैले यो नवजात शिशु, शिशुहरू, गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाहरू र इम्युनोकोम्प्रोमाइज्ड व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षित हुन्छ।
हेप बी खोप साइड इफेक्ट
खोपले रगत वा रगत उत्पादनहरूको प्रयोग गर्दैन र सुरक्षित रहेको देखाइएको छ। सबै भन्दा साधारण पक्ष प्रभाव इंजेक्शन साइटमा दुखाई छ।अन्यथा, १ देखि%% [ती खोप लगाईनेहरूमा]] टाउको दुख्ने, जोड्ने दुखाइ, कम ग्रेड ज्वरो, माआल्जिया, वा अस्वस्थता रिपोर्ट गर्दछ, डा। असगरपुर भन्छन्। साइड इफेक्टको कम जोखिमको साथ, यसले निश्चित रूपमा चिकित्सकहरू र बिरामीहरूलाई खोप लगाउँछ।
गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाहरू विरलै मात्र हुन्छन्, तर यदि कुनै स्वास्थ्य समस्याले तपाईलाई निम्न कुनै साइड इफेक्टहरू अनुभव गरे भने निश्चित स्वास्थ्यकर्मीबाट द्रुत रूपमा मद्दत लिनुहोस्।
तिनीहरू खतरनाक प्रतिक्रियाको लक्षण हुनसक्दछन्।
बीमा कभरेज र लागत
यस अनुसार CDC , सबै स्वास्थ्य बीमा बजार योजनाहरू र सबै निजी बीमा कम्पनीहरूले हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिनको लागत कभर गर्दछ यदि तपाईं एक नेटवर्क प्रदायक प्रयोग गर्नुहुन्छ। मेडिकेयर भाग बीले हेपबी खोप कभर गर्दछ यदि तपाईं एक उच्च जोखिम समूहमा हुनुहुन्छ भने। प्रयोग भ्याक्सिनको ब्राण्ड सहित र यो बाल बालिक वा वयस्कहरूको प्रयोगको लागि समावेश सहित धेरै कारकहरूद्वारा मूल्य फरक हुनेछ, तर सामान्यतया खोप यसको मूल्य भन्दा कममा लिन सक्दछ। $ १ to० को माथि $ १ward० सम्म । तिमी सक्छौ खोप लिनुहोस् तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको कार्यालय वा केही स्थानीय स्वास्थ्य विभागहरू मार्फत। तपाईंको क्षेत्र फार्मेसी पनि यसलाई प्रशासन गर्न सक्षम हुन सक्छ। अधिकको लागि हेपेटाइटिस बी र अन्य खोपमा बचत तपाईंको फार्मेसीमा उपलब्ध छ, तपाईंको एकलकेयर कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्।
कसरी हेपेटाइटिस बी बाट आफूलाई बचाउने
जबकि त्यहाँ एन्टिवाइरल औषधिहरू छन् जसले ढिलो र कलेजो क्षति हेपेटाइटिस बीका कारणहरूलाई सीमित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, कुनै उपचार छैन। रोकथाम कुञ्जी हो। खोप लगाउनुका साथै तपाई आफैंलाई जडानबाट जोगाउनका लागि यी सल्लाहहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन :
कसरी छिटो उच्च रक्तचाप कम गर्न
रगत वा शरीरको अन्य तरल पदार्थहरूको सम्पर्कमा आए पछि साबुन र पानीले आफ्ना हातहरू राम्ररी धुनुहोस्।
यौन सम्बन्ध राख्दा बाधा संरक्षण (कन्डम) प्रयोग गर्नुहोस्।
टूथब्रश, रेजर, झुम्का वा नेल क्लिपरहरू साझा नगर्नुहोस्।
शिरापरक औषधि प्रयोगबाट जोगिनुहोस्।
चोटपटक पछि सतहमा रगतका थोपाहरू सफा गर्नुहोस् कुनै एक भागको ब्लीचको समाधानसहित नौ भाग पानीमा।
निश्चित गर्नुहोस् कि नयाँ, बाँझ सुई र मसीहरू प्रयोग गरिन्छ जब तपाईं छेड्ने, ट्याटू, वा एक्यूपंक्चर पाउनुहुन्छ र यी सेवाहरू केवल इजाजतपत्र पसलहरूबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ।
सबै खोपहरूमा अद्यावधिक रहनुहोस्, विशेष गरी हेपेटाइटिस ए।
यदि तपाईं गर्भवती हुन खोज्दै हुनुहुन्छ वा गर्भवती हुनुहुन्छ भने, हेल्पाइटिस बी चाँडै परीक्षण र खोपको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
यदि तपाईं स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा खुला कामदार हुनुहुन्छ भने, सँधै सिफारिस गरिएको विश्वव्यापी सावधानी अपनाउनुहोस्।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईलाई हेपेटाइटिस बी छ, हेपेटाइटिस बीको जोखिममा छ, वा पत्ता लगाइएको छ भने, सकेसम्म चाँडो आफ्नो प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
जब श in्कास्पद छ, अधिक स्वास्थ्य बचाउने उपायहरू पत्ता लगाउन पेशेवर स्वास्थ्य सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
वजन घटाने को लागी Yacon सिरप:5छिटो तथ्यहरु तपाइँ जान्न आवश्यक छ
खोकी र भीड को लागी के राम्रो छ
के स्याउ साइडर सिरका तपाइँको शरीर को लागी गर्दछ
चिसो बाट खोकी कहिले सम्म रहन्छ?
एक राम्रो उपवास रगत ग्लुकोज स्तर के हो
के म वाइन पिए पछि बेनाड्रिल लिन सक्छु?
यो कति समय लाग्छ trintellix लाई काम गर्न को लागी